Ny Famolavolana Anatiny
Asabotsy 8 Mey 2021
Ny Famolavolana Anatiny Io fiara-trano fandraisan'ireto mpikambana ity dia mikendry ireo mpanatanteraka izay mazoto handany alina isan-tanàna. Mandeha dia tsy milaza fa hahatsapa zavatra manokana sy miavaka ho an'ireo maniry ho tonga mpikambana ary vonona ny hampiasa ity bara ity. Inona no kokoa, rehefa manomboka mampiasa eto ianao, ny fampiasana sy fampiononana dia hanana dikany lehibe ho an'ny endrika fampiasa. Mety ho hitanao fa hafahafa ireo lafiny roa voalaza etsy ambony ireo, ary ny hanomezana fikasihana mivantana fotsiny no fanamby. Eny tokoa, io "lafiny roa" io no teny fanalahidy amin'ny famolavolana io trano fandraisam-bahiny io.
Ny Trano Fisakafoanana Japanese Cutlet
Zoma 7 Mey 2021
Ny Trano Fisakafoanana Japanese Cutlet Ity dia trano fisakafoanana fisakafoanana japoney iray antsoina hoe "Saboten", trano fisakafoanana voalohany ao Chine. Ny fanovana ny fomba amam-panao sy ny fanatsarantsika tsara dia ilaina mba hahamora kokoa ny kolontsaina japoney eken'ny firenena vahiny. Eto, raha jerena ny fahitana amin'ny rojom-pisakafoanana amin'ny ho avy, dia nanao drafitra ho lasa boky mahasoa isika rehefa manitatra any Chine sy any ivelany. Avy eo, ny iray amin'ireo fanamby napetrantsika dia ny hahatakatra ny fahazoana tsara ny "sary japoney" izay tian'ny vahiny. Nifantoka indrindra tamin'ny "Japoney nentim-paharazana" izahay. Izahay dia manandrana mitady ny fomba hametrahana azy io.
Ny Famolavolana Anatiny Amin'ny Oniversite
Alakamisy 6 Mey 2021
Ny Famolavolana Anatiny Amin'ny Oniversite Ny sehatra TED University izay noforonina miaraka amin'ny foto-kevitra moderina maoderina dia taratry ny fandrosoana sy tantaran'ny andrim-panjakana TED. Ny fitaovana maoderina sy Raw dia miaraka amin'ny fotodrafitrasa sy haitao ara-teknolojia. Amin'izao fotoana izao dia apetraka ny fivoriambe sehatra izay tsy mbola niainana. Ny karazana fahitana vaovao ho an'ny sehatra oniversite dia noforonina.
Ny Tranon'ny Birao Anatiny Endrika
Alarobia 5 Mey 2021
Ny Tranon'ny Birao Anatiny Endrika Shirli Zamir Design Studio dia namolavola ny birao vaovao Infibond ao Tel Aviv. Taorian'ny fikarohana momba ny vokarin'ny orinasa dia namorona toeram-piasana iray ny hevitra izay mametra-panontaniana momba ny sisintany manify izay miavaka amin'ny zavamisy amin'ny sain-tsaina, ny atidoha ary ny teknolojia ary ny mahita hoe mifandray daholo ireo rehetra ireo. Ny studio dia nikaroka ny fatra mety ho an'ny fampiasana ny tahiry sy ny tsipika ary ny tsy misy azy izay hamaritra ny habaka. Ny drafitry ny birao dia ahitana efitrano fitantanana, efitrano fivoriana, salons ofisialy, kafeina ary efitrano malalaka, efitrano fandraisam-bahiny mihidy ary toerana malalaka miasa.
Ny Famoronana Trano Maritrano Trano
Talata 4 Mey 2021
Ny Famoronana Trano Maritrano Trano Ny tetik'asa "Barn by renirano" dia miatrika fanamby amin'ny famoronana toerana honenana, mifototra amin'ny fidirana amin'ny tontolo iainana, ary manolotra vahaolana manokana eo an-toerana momba ny olana amin'ny interpenetration an'ny tontolo. Ny archetype nentim-paharazana amin'ny trano dia entina amin'ny asceticism amin'ny endriny. Ny kirihitrala eny amin'ny tafo sy ny rindrina skistia maintso dia manafina ny trano ao anaty ahitra sy kirihitrala ny faritry ny olona. Ao ambadiky ny rindrin'ny fitaratra dia hita ilay renirano be vato.
Ny Tranombarotra Feno Menaka Manitra
Alatsinainy 3 Mey 2021
Ny Tranombarotra Feno Menaka Manitra Ny sarin'ny alika ririnina iray izay lasa fitaomam-panahy amin'ity tetikasa ity. Ny habetsaky ny habetsaky ny hazavana vita amin'ny hazo voajanahary sy granita dia manondraka ny mpijery ao anaty rantsam-by plastika sy sary manaitra ny famantarana ny natiora. Ny karazana indostrialy indostrialy dia malefaka noho ny lokon'ny varahina mena sy maitso mena. Toerana mahasarika sy serasera ho an'ny olona mihoatra ny 2000 isan'andro.
LOTUS Ny Efitrano Fandroana Asabotsy 19 Jona
Electra Faucets Zoma 18 Jona
Osoro Ny Rafi-Panokatra Misokatra Alakamisy 17 Jona
Ny Famolavolana Anatiny Ny Trano Fisakafoanana Japanese Cutlet Ny Famolavolana Anatiny Amin'ny Oniversite Ny Tranon'ny Birao Anatiny Endrika Ny Famoronana Trano Maritrano Trano Ny Tranombarotra Feno Menaka Manitra